Madaxwayne Farmaajo oo u dhoofay Asmara, muxuu socodku daaranyahay? (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 28, 2018 10:32 b 0
Madaxwaynaha Dowladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo u dhoofay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eriteriya.
Madaxwanaha ayaa waxaa uu raacay diyaarad khaas ah, waxaana socdaalkiisa lagu sheegay mid sare loogu qaadayo xiriirka diblumaasiyadeed ee labada dal Soomaaliya iyo Eriteriya.
Isbadalo waawayn ayaa kasocda Geeska Afrika, taasi oo ay lu ku leeyihiin dowladaha waawayn iyo Imaaraatka Carabta oo doonaya inuu la wareego dekedda Asmara, kadib markii laga soo eryay dekedda Jabuuti, horayna baarlamaanka Soomaaliya uu kasoo saaray sharci dhigaya inaanay maamuli karin dkedaha Soomaaliya.
Soomaaliya ayaan la ogayn isbadalka Geeska Afrika ka bilowday oo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan saamaynaya ay ka faa’iidaysan doonto iyo in kalle.
Iskuulka Masaarida ee Qardho oo maamul cusub yeeshay (dhegayso)